Bir yabancıyla nasıl konuşulur / Ahoana ny fomba firesaka amin'ny olon-tsy fantatra – Diyaloglar | OpenTran
Bir yabancıyla nasıl konuşulur / Ahoana ny fomba firesaka amin'ny olon-tsy fantatra – Diyaloglar
Çevirmen & Sözlük çevrimiçi Türkçe-madagaskarlı çeviri Bir yabancıyla nasıl konuşulur / Ahoana ny fomba firesaka amin'ny olon-tsy fantatra – Diyaloglar
Tovovavy (misy fakan-tsarimihetsika): Miala tsiny fa miresaka amiko ianao?
Zazalahy: Ie, mila manontany zavatra haingana fotsiny ianao.
Zazalahy: headphones iza no ampiasainao? Tena mahafinaritra izy ireo.
Tovovavy: Skullcandy's ireto. Ny anarana maodely dia 'Crusher'.
Zazalahy: Raha tsy maninona ianao, azoko atao ve ny manara-maso?
Tovovavy (misalasala): Eny ary… any ianao.
Zazalahy (rehefa avy nanamarina ny kalitaon'ny feo): Tena mahagaga. Tsy nanantena an'izany aho. Tsy mbola mpankafy an'i Skullcandy mihitsy.
Zazalahy: ohatrinona ny vidiny?
Tovovavy: 6500 / -.
Zazalahy: Vokatra mahatalanjona amin'ny vidiny ambany toy izany. Ny kalitaon'ny feo dia tena tsara. Midika izany fa azoko atao ny mamoaka ara-bakiteny ny feon'ireo zava-maneno rehetra tadiavina, ny fikotrokotroka, ny fitsofana ny gitara mavesatra dia mamely ny zava-drehetra.
Tovovavy: Ie Skullcandy dia tonga amin'ny vokatra tena tsara ankehitriny. Azonao atao ny manandrana modely hafa toy ny 'Hesh2' sy 'Uprock'. Ireo maodely ireo koa dia mihoatra noho ny fahafaha-manome ny olona rehetra fahatsapana ho sofina.
Zazalahy: Oh tena? Fa izao kosa dia nipoitra fisafotofotoana tato an-tsaiko ianao.
Tovovavy: fikorontanana inona?
Zazalahy: Izay modely iza no tsara indrindra?
Tovovavy: nanandrana ny tenanao ianao. Ho an'ny hafa, afaka mandeha ianao ary manamarina ireo hevitra ao amin'ny Internet.
Zazalahy: Ie azoko antoka. Raha ny miala tsiny dia hadinoko ny nampahafantatra ahy, izaho dia Harsh. Izaho dia B. Com. mpianatra tamin'ny taona lasa tao amin'ny College College Hansraj.
Tovovavy: Sakshi aho. Miara-miasa amin'ny Genpact aho. Oops! Tonga ihany koa ny tobiko, fotoana hialana. Nahafinaritra ny nihaona taminao teny an-dalana. Mifanojo eny foana.
Zazalahy: Ie Azo antoka.
Benim evim Ny tranoko
Sınıftaki Yeni Bir Öğrenci Mpianatra vaovao ao am-pianarana
İlk buluşma Daty voalohany